vadzidzi vanowana mahara airpods ane ipad pro kana ipad yekutenga mweya panguva yekusimudzira
Kuru Nhau & Ongororo Vadzidzi vanowana mahara AirPods neiyo iPad Pro kana iPad Mhepo kutenga panguva yekushambadzira
Vadzidzi vanowana mahara AirPods neiyo iPad Pro kana iPad Mhepo kutenga panguva yekushambadzira
Zvinonzwa sekunge gore rechikoro rakangopera mune mamwe matunhu uye zvatove Apple irikuyeuchidza vadzidzi kuti kutanga kwegore rinotevera rechikoro kwaswedera. Iyo tech hofori yakazivisa yayo Yekudzokera kuchikoro chibvumirano che2021 uye inosanganisira mahara maAirPods nekutengwa kweanokodzera iMac kana iPad chishandiso. Kana iye mudzidzi achida kubhadhara yakawanda, iye / iye anogona kushandura mahara AirPods kuita yemahara AirPods Pro ine Active Noise Cancellation uye Transparency Mode.
Iyo yemahara AirPods inowanikwa nekutenga kweiyo Pro Pro (2021) kana iyo iPad Mhepo (2020). Iyo dhiri inopihwa zvakare nekutengwa kweiyo iMac, Mac mini, Mac Pro, MacBook Pro uye MacBook Mhepo inosanganisira yetsika mamodheru akavakirwa-ku-odha.
11-inch iPad Pro (2021) uye yechipiri-gen AirPods
Chipo$ 749Tenga kuApple
iPad Mhepo (2020) uye AirPods
Chipo$ 549Tenga kuAppleNekusimudzirwa, vadzidzi vari kuchengetedza $ 159 kuti vagamuchire yemahara yechipiri-chizvarwa AirPods ine wired yekuchaja kesi. Kutsiva wired yekuchaja kesi neisina waya kunodhura makumi mana emadhora, uye kune $ 90 mudzidzi anogona kukwidziridzira kuAirPods Pro nekero isina waya yekuchaja.
Apple inotangisa kusimudzira kwe2021 Kudzokera Kuchikoro Kunze kwekubatsirwa nemahara maAirPods kana kukwidziridzwa kwemitengo yakaderera, Apple iri kupa mudzidzi 5% -10% dhisikaundi pamutengo wechigadzirwa chakakodzera chavanotenga. Semuenzaniso, iyo 11-inch iPad Pro (2021) ine mutengo wemari iri $ 749. Saka kusvika munaSeptember 27th apo kukwidziridzwa kunopera, vadzidzi vanogona kunyorera M1 inofambiswa piritsi uye yechipiri-gen AirPods ine wired yekuchaja kesi ye $ 749.
Parizvino Promo yekudzokera kuchikoro inowanikwa chete mumatunhu kunyangwe pachivanhu Apple inosanganisira mimwe misika, senge yeUK, mavhiki mashoma mushure mekutanga kweU.S.
giya s2 vs s2 classic
kiinura iphone 6 chitoro cheapuro
LG Stylo 5 vs. Pen 4 - specs kuenzanisa
Vanyoreri veT-Mobile vanogona kusevha inosvika kumadhora mazana mana paApple iPhone 7 uye iPhone 7 Plus
RIP, KubataWiz! Kureba rarama Samsung Chiitiko
Kubuda kutsva kunoti Galaxy S21 Ultra haikunde & apos; inoita kuti iwe usarudze pakati pekugadzirisa zvizere uye yakakwira zororo reti
Google Runhare app kuti utore Yekufona ID chiziviso uye akati wandei maficha maficha munguva pfupi
Samsung Galaxy S8 vs Apple iPhone 7: yakanakisa yezvakanakisa